လင်ငယ်နဲ့အတူ လင်ယောက်ျားမောင်းတဲ့တက္ကဆီကိုစီးဖို့ ငှားမိတဲ့ အမျိုးသမီး - HARTHANANTAW
International News March 21, 2020 No Comment
ယီမိုင်အမည်ရ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ပြီး လင်ငယ်နဲ့အတူချိန်းတွေ့စဉ် အတူစီးဖို့ငှားတဲ့တက်ဆီဟာ လင်ကြီးမောင်းတဲ့တက်ဆီ ဖြစ်နေတာကြောင့် အရှုပ်အထွေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ El Espectador မှဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ရပ်အရသိရပါတယ် … ။
လောကမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း တိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီဖြစ်ရပ်ကသက်သေပြနေပါတယ် … ။
အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာလင်ငယ်ဖြစ်သူနဲ့ ဖာက်ပြန်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ လင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတော့သတင်းစာက မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး … ။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့က Santa Marta မြို့မှာ ချိန်းတွေ့ကြပြီး ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့ Uber တက်ဆီ ငှားရမ်းဘွတ်ကင်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ …. ။
Uber အပလီကေးရှင်းကနေ ဘွတ်ကင်လုပ်စဉ် ကားမောင်းသူနေရာမှာ လီယိုနာဒိုလို့ ဖော်ပြထားတာကြောင့် ၂ယောက်စလုံးစိုးရိမ်စိတ် မရှိခဲ့ပါဘူး … ။
ဒါပေမယ့် Uber မှာစာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကားမောင်းသမားလီယိုနာဒိုဟာ လင်ကြီးရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လင်ကြီးဟာ သူငယ်ချင်းကားကိုခဏငှားပြီးအချိန်ပိုင်းကားမောင်း အပိုဝင်ငွေရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကားပေါ်စရောက်ရောက်ချင်း လင်ကြီးက အံအားသင့်သွားပြီး ဒေါသထွက်သွားခါ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် … ။
ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် Uber မှတာဝန်ရှိသူတွေဟာ လင်ကြီးကို ကားငှားပေးသူ သူငယ်ချင်းလီယိုနာဒိုကို စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် အရေးယူခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သူတွေအနေဖြင့် တက်ဆီဘွတ်ကင်လုပ်မည်ဆိုလျှင် Uber အပလီကေးရှင်းတွေဟာ သွားမည့်နေရာ အချိန်စတာတွေကို မှတ်သားထားတာကြောင့် အရင်ကလိုလိမ်ညာဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာသိထားဖို့ သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ် …. ။
ယီမိုငျအမညျရ ကိုလံဘီယာနိုငျငံသူ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျပွီး လငျငယျနဲ့အတူခြိနျးတှစေ့ဉျ အတူစီးဖို့ငှားတဲ့တကျဆီဟာ လငျကွီးမောငျးတဲ့တကျဆီ ဖွဈနတောကွောငျ့ အရှုပျအထှေးတှဖွေဈခဲ့ကွောငျး ကိုလံဘီယာနိုငျငံမှ နာမညျကွီး သတငျးစာတဈစောငျဖွဈတဲ့ El Espectador မှဖျောပွတဲ့သတငျးတဈရပျအရသိရပါတယျ … ။
လောကမှာ ထူးထူးဆနျးဆနျး တိုကျဆိုငျမှုတှဖွေဈလရှေိ့တယျဆိုတာ ဒီဖွဈရပျကသကျသပွေနပေါတယျ … ။
အဆိုပါအမြိုးသမီးဟာလငျငယျဖွဈသူနဲ့ ဖာကျပွနျနတော တဈနှဈကြျောပွီဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ လငျကွီးရဲ့နာမညျကိုတော့သတငျးစာက မဖျောပွခဲ့ပါဘူး … ။
ဖွဈစဉျမှာ ပွီးခဲ့တဲ့အင်ျဂါနကေ့ Santa Marta မွို့မှာ ခြိနျးတှကွေ့ပွီး ဟိုတယျကိုသှားဖို့ Uber တကျဆီ ငှားရမျးဘှတျကငျလုပျခဲ့ကွတာပါ …. ။
Uber အပလီကေးရှငျးကနေ ဘှတျကငျလုပျစဉျ ကားမောငျးသူနရောမှာ လီယိုနာဒိုလို့ ဖျောပွထားတာကွောငျ့ ၂ယောကျစလုံးစိုးရိမျစိတျ မရှိခဲ့ပါဘူး … ။
ဒါပမေယျ့ Uber မှာစာရငျးသှငျးမှတျပုံတငျထားတဲ့ ကားမောငျးသမားလီယိုနာဒိုဟာ လငျကွီးရဲ့သူငယျခငျြးတဈယောကျဖွဈပွီး လငျကွီးဟာ သူငယျခငျြးကားကိုခဏငှားပွီးအခြိနျပိုငျးကားမောငျး အပိုဝငျငှရှောနတောဖွဈပါတယျ။
ကားပျေါစရောကျရောကျခငျြး လငျကွီးက အံအားသငျ့သှားပွီး ဒေါသထှကျသှားခါ ရုနျးရငျးဆနျခတျ ဖွဈခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ … ။
ဒီဖွဈရပျကွောငျ့ Uber မှတာဝနျရှိသူတှဟော လငျကွီးကို ကားငှားပေးသူ သူငယျခငျြးလီယိုနာဒိုကို စညျးကမျးဖောကျဖကျြမှုဖွငျ့ အရေးယူခဲ့ပွီး အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျသူတှအေနဖွေငျ့ တကျဆီဘှတျကငျလုပျမညျဆိုလြှငျ Uber အပလီကေးရှငျးတှဟော သှားမညျ့နရော အခြိနျစတာတှကေို မှတျသားထားတာကွောငျ့ အရငျကလိုလိမျညာဖို့မလှယျတော့ဘူးဆိုတာသိထားဖို့ သတိပေးပွောကွားခဲ့ပါတယျ …. ။